Adobe Pagemaker 7.0 (မြန်မာလို)
Pagemaker ကတော့ ဒီဇိုင်းလုပ်သူတိုင်း၊ ဂျာနယ်ဒီဇိုင်းဆွဲသူတိုင်း၊ စာစီစာရိုက်လုပ်နေသူတိုင်း မသိတဲ့သူမရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ် . အခုက pagemaker အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကို အသေးစိတ်ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်လေးကို ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ ..
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download 4shared ၊ Download rapidshare ၊ Download megaupload